No delete [Virus News]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Virus Problems » No delete [Virus News]
1 No delete [Virus News] on 11th March 2011, 2:27 pm
No delete ဆိုသည့်ဖိုင်များထုတ်ပေးသည့် virus တစ်မျိူးအား ပြည်တွင်းကွန်ပျူတာများတွင် တွေ ့ရှိလာသည်ဟု Computer များ virus ကိုက်သည့်အခါဘ Windows အသစ်မတင်ပဲ မူလာ Windows မှာပင် virus ရှင်းလင်းပေးနေသည့် Mr.Htet Virus Lab မှသိရသည်။
အဆိုပါ Virus ၏ အချက်အလက်များမှာ-
Name - wcybsvc.exe, wcynsvc.ocx
Type	- worm
Size	-53248 bytes
Location	- \_system32
အခြား virus များကဲ့သို ့file များကို hidden လုပ်ခြင်း၊ Task Manager, Folder Option နှင့် Registry Editor များကို ပိတ်ခြင်းမလုပ်ဘဲ စက်အတွင်း virus မရှိသကဲ့သို ့ဟန်ဆောင်နေတတ်သည်။ Windows Service အတွင်းတွင်လည်း ‘Windows Net ware work information Setup keep’ ဟူပြီး မထင်မှတ်လောက်သော အမည်ဖြင့် နေရာယူကာအလုပ်လုပ်ပြီး အခြား memory stick များတပ်လိုက်လျှင် ‘No Delete’ ဟူသော အမည်ဖြင့် Folder ပုံစံပြုလုပ်ကာ user မှားယွင်းဖွင့်မိစေရန် application file ကိုဟန်ဆောင်ထားခြင်း
How to kill this virus
1.	Start>Run တွင် msconfig ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
2.	Services tab ကို နှိပ်ပြီး Services စာရင်းတွင် ‘windows netware work information setup keep’ တွင် right click နှိပ်ပြီး stop ကိုနှိပ်ပါ။
3.	ထို ့နောက် Start>Run တွင် %systemroot% ဟုရိုက်ပြီး wcybsvc.exe, wcynsvc.ocx ဖိုင်များကိုဖျက်ပါ။
( NetGuide Journal vol:1, issue:68, Page -18 မှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
2 Re: No delete [Virus News] on 14th August 2011, 1:38 pm
ကျွန်တော့် stick ထဲမှာအဲဒီ virus ၀င်နေတာဘယ်လိုသတ်ရမလဲပြောပါဦး format မချချင်ဘူး.....
3 Re: No delete [Virus News] on 14th August 2011, 4:14 pm
အကို့ဆီမှာ စာမပေါ်လို့လား ဒါမှမဟုတ် မဖတ်ရသေးတာလား
ဖတ်ပြီးလို့ မရတာလားလေး တစ်ချက်ပြောပြပေးပါ
4 Re: No delete [Virus News] on 16th August 2011, 3:28 pm
ေအးေဆးလူ wrote: ကျွန်တော့် stick ထဲမှာအဲဒီ virus ၀င်နေတာဘယ်လိုသတ်ရမလဲပြောပါဦး format မချချင်ဘူး.....
ကွန်တော်သတ်နည်လေးပါထည့ရေပေးထားပါတယ်။ မရဘူးလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ မစမ်းဘူတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ (ဟီ....မကြုံဘူသေးတာ)
5 Re: No delete [Virus News] on 16th August 2011, 9:17 pm
stick ထဲကအကောင်ကိုသတ်လို့မတတ်တာပါ..သူက delete လုပ်လို့လဲမရဘူး folder တွေပွားထုတ်တယ် delete မလုပ်ရဲတော့ဘူး...နောက်ပြီးပြောရဦးမယ် ကျွန်တော်က ဒီဖိုရမ်ရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ Unicode နဲ့က ကျွန်တော်
တို့လို ဆိုင်မှာသုံးတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူးဗျာ..ဆိုင်တော်တော်များများက ဇော်ဂျီတွေပဲတင်ထားကြတာဆိုတော့ ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် ရေးဖို့ဆိုဝေလာဝေးပဲ
အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ရင်ဇော်ဂျီ သုံးသူတွေအတွက်တော့ တစ်ခုခုတော့စီစဉ်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါ၇စေနော်
6 Re: No delete [Virus News] on 16th August 2011, 10:52 pm
အကိုရေ စာဖတ်ဖို့အတွက်က ညာဘက်ထောင့်လေးမှာ​ အပြာရောင်စာလေး ၂ ခုရှိတယ် အကိုက ဇော်ဂျီသမားဆိုတော့
အကိုဖတ်လို့မရတဲ့စာတွေဆို Click! to read in Zawgyi လေးနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးတော့ စာရေးဖို့အတွက်က messages box ပေါ် mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ box လေးတစ်ခုကျလာတယ်လေ
အဲဒီ့မှာ "Default", "Myanmar3", "ZawgyiL" ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
-ZawgyiL ကဆိုတာလေးကို ရွေးပြီးရင် အကိုကြိုက်သလိုသာဇော်ဂျီနဲ့ရိုက် ယူနီကုဒ်နဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်
7 Re: No delete [Virus News] on 16th August 2011, 11:10 pm
စာဖတ်ကြပါ။ စာဖတ်ကြပါ။ စာဖတ်ကြပါ။
ဖိုရမ်ရဲ့ ပရိသတ်ဆိုရင်လည်း ​ပရိသတ်ပီပီ၊ ဖိုရမ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေ၊ ကြေညာချက်လေးတွေကို မျက်ခြေမဖြတ်ထားကြပါနဲ့။
8 Re: No delete [Virus News]